अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना हुँदा १५ जनाको निधन, आफन्तहरुको रुवाबासी ! – " सुलभ खबर "
अर्घाखाँचीमा बस दुर्घटना हुँदा १५ जनाको निधन, आफन्तहरुको रुवाबासी !
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका–६ नरपानीमा आज बेलुका भएको बस दुर्घटनामा १० जनाको घटनास्थलमै र ५ जनाको हस्पिटलमा उपचार गर्दै गर्दा निधन भएको छ ।
सन्धिखर्कबाट बुटवल जाँदै गरेको लु२ख २१४८ नम्बरको बस नरपानी बजार नजिकैको घुम्तीमा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनास्थलमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी तथा स्थानीयवासीले उद्धार गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म १० जनाको घटनास्थलमै र अन्यको उपचारको कराममा निधन भएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
यो पनि पढ्नुहोस : काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यताबारे स्थलगत अध्ययन